Mozilla ewepụtara ndị mmekọ Firefox, ọzọ | Site na Linux
Mozilla weputara mgbakwunye Firefox, ọzọ
Mozilla weghachite mmemme ahụ Mgbakwunye Firefox, oghere nkịtị iji nweta ma kesaa nbudata bọtịnụ de Firefox y Mozilla.
Dị ka ha na-agwa anyị n'ime Mozilla-Hispanik, ndị na-akwado ya ga-enweta onyinye, nkwanye ugwu na ezi vibes na nke kacha mma ga-egosi na leaderboards otú ha nwere ike merie oké nwa anụmanụ nke Firefox.
Usoro izizi bọtịnụ izizi dị Firefox maka Desktọpụ, Firefox maka ekwentị mkpanaaka y Lelee ngwa mgbakwunye gị, ọ bụ ezie na a ga-anọgide na-agbakwunye bọtịnụ, mpaghara, na atụmatụ ndị ọzọ na usoro ihe omume ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịbụ akụkụ nke otu Mgbakwunye Firefox, ị nwere ike ịkpọtụrụ ndị na-elekọta ihe na Mgbakwunye@mozilla.org ma ọ bụ sonye na ọwa ndị irc #affiliates. Anyị nwekwara ike ịghọ ndị otu ma tinye otu bọtịnụ na saịtị anyị. M tinyere nke a:
Debanye taa ịbụ onye na-akwado Firefox.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Mozilla weputara mgbakwunye Firefox, ọzọ
SilentEye: Zoo otu faịlụ n'ime ọzọ
Na-amalite mgbe niile site na Gnome-Shell na Ubuntu 11.10